Emirates လကွေောငျးလိုငျး အမွတျ အမရေိကနျဒျေါလာ ၂၂၈ သနျး ရရှိကွောငျး ထုတျပွနျ - Logistics Guide
ယူအအေီး (အာရပျစျောဘှားမြား ပွညျထောငျစု)မှ လကွေောငျးလိုငျး Emirates က ၂၀၁၉ ဧပွီလ ၁ ရကျမှ ၂၀၂၀ မတျလ ၃၁ ရကျအထိ
ဘဏ်ဍာရေးတဈနှဈစာ ထုတျပွနျကွညောရာ အမရေိကနျဒျေါလာ ၂၂၈ သနျး ရရှိကွောငျး ဖျောပွထားပွီး ၃၂ နှဈဆကျတိုကျ အမွတျရရှိခဲ့သညျ။ ယူအအေီးမှ အခွားလကွေောငျးလိုငျးတဈခု ဖွဈသော Etihad Airways မှာမူ အမရေိကနျဒျေါလာ သနျး ၈၇၀ အရှုံးပျေါသညျ။ နှဈစဉျ အရှုံးပွနခေဲ့သညျမှာ ပွီးခဲ့သညျ့ လေးနှဈတာတှငျ အမရေိကနျဒျေါလာ ၅ . ၆ ဘီလြံ ဆုံးရှုံးခဲ့သညျ။
Emirates ၏ အဓိကကသြော ကိနျးဂဏနျးမြားကို ပွီးခဲ့သညျ့နဈနှငျ့ နှိုငျးယှဉျ ပွောဆိုမညျ ဆိုပါလြှငျ
ဝငျငှသေညျ ၆% လြော့ကြ၊ အမရေိကနျဒျေါလာ ၂၅. ၁ ဘီလြံ
ခရီးသညျထိုငျခုံခုရလေညျး ၆% လြော့ကြ
Emirates လယောဉျအုပျစုသညျ စီးရေ ၂၇၀ တသမတျတညျး ထားရှိသညျ။ Airbus A380 ၆ စီး အသဈဝယျသညျ။ Boeing 777 အဟောငျး ၆ စီး ရောငျးထုတျလိုကျသညျ။
Emirates လယောဉျ ၂၇၀ စီး၏ ပမျြးမြှသကျတမျးမှာ ၆ . ၈ နှဈ ဖွဈသညျ။
လယောဉျဆီ ဈေး ၉ % လြော့ကသြဖွငျ့ လညျပတျစရိတျ လြော့ကသြညျ။
ပြံသနျးမှုနယျပယျမြားကို ဒသေမြား ခှဲခွားသတျမှတျထားပွီး ဝငျငှေ ရရှိမှု မြှတသညျ။ မညျသညျ့ ဒသေမှ ဝငျငှေ စုစုပေါငျး၏ ၃၀% ထကျ ပိုမြားခွငျး မရှိခြေ။
ဥရောပဒသေ ဝငျငှေ အမရေိကနျဒျေါလာ ၇ . ၁ ဘီလြံ
အာရှအရှပေို့ငျးနှငျ့ ဩစတေးလြ ဝငျငှေ အမရေိကနျဒျေါလာ ၆ . ၆ ဘီလြံ
အမရေိက ဝငျငှေ အမရေိကနျဒျေါလာ ၄ ဘီလြံ
အာဖရိက ဝငျငှေ အမရေိကနျဒျေါလာ ၂ . ၄ ဘီလြံ
ပငျလယျကှနှေ့ငျ့ အရှအေ့လယျပိုငျးဒသေ ဝငျငှေ အမရေိကနျဒျေါလာ ၂ . ၁ ဘီလြံ
အာရှအနောကျပိုငျးနှငျ့ အိန်ဒိယသမုဒ်ဒရာဒသေ ဝငျငှေ အမရေိကနျဒျေါလာ ၂ . ၇ ဘီလြံ
Emirates လကွေောငျးလိုငျးသညျ ဖဖေျောဝါရီ လလယျမှစ၍ ကူးစကျရောဂါကပျဘေးကွောငျ့ အထိနာသညျ။ မိခငျနိုငျငံ ဒူဘိုငျး အပွညျပွညျဆိုငျရာလဆေိပျသည ၄၅ ရကျတိုငျတိုငျ ပိတျထားခဲ့သညျ။ အမရေိကနျဒျေါသညျ Emirates ပြံသနျးနသေော ဒသေမြားရှိ ငှကွေေးမြားထကျ ခိုငျမာနသေဖွငျ့ ငှလေဲနှုနျးမြားကွောငျ့ လကွေောငျးလိုငျးသညျ အမရေိကနျဒျေါလာ ၂၆၂ သနျး နဈနာဖှယျ ရှိသညျ။ လယောဉျဆီမြား ကွိုပှိုငျ့ ဝယျယူသညျ့ ဈေးနှုနျးသညျ ရနေံဈေးထိုးကသြဖွငျ့ ဖွဈပျေါနသေော ကာလပေါကျဈေးထကျ ဈေးကွီးနသေညျ။ ထို့အတှကျ လကွေောငျးလိုငျးသညျ အမရေိကနျဒျေါလာ ၂၉၉ သနျး နဈနာဖှယျ ရှိသညျ။
Emirates လေကြောင်းလိုင်း အမြတ် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၂၈ သန်း ရရှိကြောင်း ထုတ်ပြန်
ယူအေအီး (အာရပ်စော်ဘွားများ ပြည်ထောင်စု)မှ လေကြောင်းလိုင်း Emirates က ၂၀၁၉ ဧပြီလ ၁ ရက်မှ ၂၀၂၀ မတ်လ ၃၁ ရက်အထိ ဘဏ္ဍာရေးတစ်နှစ်စာ ထုတ်ပြန်ကြေညာရာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၂၈ သန်း ရရှိကြောင်း ဖော်ပြထားပြီး ၃၂ နှစ်ဆက်တိုက် အမြတ်ရရှိခဲ့သည်။ ယူအေအီးမှ အခြားလေကြောင်းလိုင်းတစ်ခု ဖြစ်သော Etihad Airways မှာမူ အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၈၇၀ အရှုံးပေါ်သည်။ နှစ်စဉ် အရှုံးပြနေခဲ့သည်မှာ ပြီးခဲ့သည့် လေးနှစ်တာတွင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၅ . ၆ ဘီလျံ ဆုံးရှုံးခဲ့သည်။
Emirates ၏ အဓိကကျသော ကိန်းဂဏန်းများကို ပြီးခဲ့သည့်နစ်နှင့် နှိုင်းယှဉ် ပြောဆိုမည် ဆိုပါလျှင်
ဝင်ငွေသည် ၆% လျော့ကျ၊ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၅. ၁ ဘီလျံ
ခရီးသည်ထိုင်ခုံခုရေလည်း ၆% လျော့ကျ
Emirates လေယာဉ်အုပ်စုသည် စီးရေ ၂၇၀ တသမတ်တည်း ထားရှိသည်။ Airbus A380 ၆ စီး အသစ်ဝယ်သည်။ Boeing 777 အဟောင်း ၆ စီး ရောင်းထုတ်လိုက်သည်။
Emirates လေယာဉ် ၂၇၀ စီး၏ ပျမ်းမျှသက်တမ်းမှာ ၆ . ၈ နှစ် ဖြစ်သည်။
လေယာဉ်ဆီ ဈေး ၉ % လျော့ကျသဖြင့် လည်ပတ်စရိတ် လျော့ကျသည်။
ပျံသန်းမှုနယ်ပယ်များကို ဒေသများ ခွဲခြားသတ်မှတ်ထားပြီး ဝင်ငွေ ရရှိမှု မျှတသည်။ မည်သည့် ဒေသမှ ဝင်ငွေ စုစုပေါင်း၏ ၃၀% ထက် ပိုများခြင်း မရှိချေ။
ဥရောပဒေသ ဝင်ငွေ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၇ . ၁ ဘီလျံ
အာရှအရှေ့ပိုင်းနှင့် ဩစတေးလျ ဝင်ငွေ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၆ . ၆ ဘီလျံ
အမေရိက ဝင်ငွေ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၄ ဘီလျံ
အာဖရိက ဝင်ငွေ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂ . ၄ ဘီလျံ
ပင်လယ်ကွေ့နှင့် အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသ ဝင်ငွေ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂ . ၁ ဘီလျံ
အာရှအနောက်ပိုင်းနှင့် အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာဒေသ ဝင်ငွေ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂ . ၇ ဘီလျံ
Emirates လေကြောင်းလိုင်းသည် ဖေဖော်ဝါရီ လလယ်မှစ၍ ကူးစက်ရောဂါကပ်ဘေးကြောင့် အထိနာသည်။ မိခင်နိုင်ငံ ဒူဘိုင်း အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်သည ၄၅ ရက်တိုင်တိုင် ပိတ်ထားခဲ့သည်။ အမေရိကန်ဒေါ်သည် Emirates ပျံသန်းနေသော ဒေသများရှိ ငွေကြေးများထက် ခိုင်မာနေသဖြင့် ငွေလဲနှုန်းများကြောင့် လေကြောင်းလိုင်းသည် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၆၂ သန်း နစ်နာဖွယ် ရှိသည်။ လေယာဉ်ဆီများ ကြိုပွိုင့် ဝယ်ယူသည့် ဈေးနှုန်းသည် ရေနံဈေးထိုးကျသဖြင့် ဖြစ်ပေါ်နေသော ကာလပေါက်ဈေးထက် ဈေးကြီးနေသည်။ ထို့အတွက် လေကြောင်းလိုင်းသည် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၉၉ သန်း နစ်နာဖွယ် ရှိသည်။